तामाकोसीको तिरैतिर | मझेरी डट कम
kbs — Sat, 05/23/2009 - 13:24
चम्पसिंह रसिला थिए । '८ वर्षको उमेरमा १८ वर्षेसँग बिहा भया' उनले आफ्नै कुरो सुनाए, '१८ वर्षको भएपछि अर्की भित्र्याएँ ।'
'दुवै झगडा गररिहने' उनले आखीभौं खुम्च्याए, 'त्यसैले तेस्री ल्याएँ ।'
उनको कुरालाई पत्याउन हामीलाई हम्मे पर्‍यो । 'उसका तीनवटै श्रीमतीसँगै छन्, 'दाइ काइँलाले हामीलाई विश्वास दिलाए । 'अब तीनवटीलाई मिलेर बस्नुको विकल्पै रहेन, चम्पले भने, मलाईमात्र होइन तँलाई पनि सौता हाल्ने रहेछन् भनेर जेठीले भनेपछि सबैको अर्की ल्याउन नदिने सर्तमा मिल्ती भयो ।
छोटा यात्रामा उनी हामीसँग यति घुलमिल भएकी हामी सहयात्री ७ जनालाई उनी घरमै लगेर कुखुरा काट्ने र जाँड खुवाउने भए । क्युरयिोका सामानको व्यापार गर्दा रहेछन् उनीहरू । गाउँमा धामीले प्रयोग गर्ने सामग्री, पुराना किताबका काठमा गाता, सुनचाँदीका पुराना गरगहना, पुराना सिक्का गाउँमा सस्तोमा किनेर राजधानीको ठमेलका क्युरयिो पसलेलाई बेच्दारहेछन् । ती सामग्री देखाए हामीलाई पनि ।सबैलाई मिलाएर राख्नसक्ने चच्पसिंहसँग गजबको सूत्र रहेछ । जुनसुकै श्रीमतीले जस्तै पकाएर दिए पनि 'मीठो छ' भन्ने । 'एउटीको पकवानको प्रशंसा गरे अर्कीले मारी हाल्छे नि ! उनले कारण सुनाए । तीनैवटीलाई बराबर माया गर्दा रहेछन् उनी ।
बसमा चढ्नुअघि खाना खुवाउन तयार भएका बसका कर्मचारीले बाटाभर िहाम्रालागि रोक्न मानेनन् । भोकले आन्द्राभँुडी झुत्ती खेलिरहेका थिए । त्यसमा पनि छिनछिनमा 'रामराम' भन्नुपर्ने भिरालो बाटो, बसलाई मोड्न नपुग्ने घुम्ती, तल सुसाइरहेको सुनकोसीको हरयिो दह । बस हल्लिँदा जिउ नै सिरङि्ग हुन्थ्यो । त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो डर र भोक भगाउने उनै चम्प थिए । सारै सोझा पेटमा कुरा अड्याउनै नसक्ने यी गौप्राणी हाम्र अन्तरंग मित्र बने त्यतिञ्जेल । हामी सबैको नाम ठेगाना टिपेर उनले राजधानी आएपछि भेट्ने बाचा गरे । निम्ता मान्न उनको घर जान भने हामी असमर्थ भयौं । नेपालथोकमा गह्रौं मनले उनलाई विदाइका हात हल्लायौं ।
चालकले हामीलाई दिनभर भोकै पारे । खाना खान कही गाडी रोकिदिएन । 'गाडीवालहरू यस्तै हुन्छन्,' सहयात्री बनेका लीलानाथ धमलाले हामीलाई सान्त्वना दिए, 'यात्रु नपाउन्जेल जहाँ पनि रोक्छन् । भाडा उठाएपछि यात्रुको कुरै सुन्दैनन् ।
'माइक्रो रजिर्भ गरयिो, तपाईंहरू कोटेश्वर पुग्नुस्,' फोनमा भोलाको आवाज सुनेपछि यात्रा त्याग्ने मनस्थितिमा पुगे पनि हतारहतार तयार भएको थिए ।
लोकगीतमा झुम्दै हामीले दोलखाको खरढिुंगासम्मको उकालीओराली काट्यौं । केही बेरमै हाम्रो माइक्रोसँगै गुडिरहेको पिकअप भ्यानलाई देब्रेबाट उछिन्ने गरी अगाडि बढ्यो झन्डै ठोकिएलाजस् तो गरी । चालकले निकै मेहनत गरेर लच्कामा अड्याउँदै भने, 'ब्रेक फेल भयो ।' सुनेपछि पो सातोपुत्लो उड्यो । सबै जना कामिरहेका थिए । कस्तो अप्ठ्यारो बाटो पार गरेर आयौं । अलि अगाडि वा पछाडि ब्रेक नलागेको भए ? हामी पक्कै समाचारका पात्र बन्ने थियौं । सँगै गुडेको पिकअप रोकियो । चालक तातेर आए । ब्रेक नलागेको बुझेपछि सेलाए । जीवन र मरण पूर्व निर्धारति हुन्छ भनेको यही पो हो कि ? हामी सबैका दिन बाँकी रहेछन् ।
'विकासमा पछि परेको साना गाउँमा तपाईंलाई स्वागत छ' लेखिएको बोर्ड पढिसक्न नपाउँदै अर्कोपटि लेखिएको 'अब र्फकंदा विकास नलिई नआउनु है,' वाक्यले सबैलाई भावुक बनायो । देवीले मन्थलीमा छन्दबारे कक्षा लिँदा त्यसैलाई उदाहरण दिए, 'पहिलो वाक्य औपचारकिता हो र दोस्रो कविता । कवितामा भावना हुनुपर्छ ।'
कार्यक्रम सकाएर र्फकने हतारोमा रहेका हामीलाई ताम्सालिङ्को बन्दको हल्लाले नराम्रोसँग चिमोट्यो । जे त पर्ला भनेर झोला भिरेर सिन्धुलीको सेलेघाटको गाडी समात्यौं । त्यो बाटोको यात्रा झनै रोमाञ्चक थियो । मान्छेले कुटोकोदालो लगाएर खनेको साँघुरो बाटोमा बस गुड्दै थियो । तल तामाकोसी सुसाउँदै थियो । आउँदा तामाकोसीले पछ्याएको थियो, जाँदा अर्कै बाटो भए पनि तामाकोसीले छाडेन । 'चालकले गाडी चलाएको कतिवर्ष भयो भाइ ?' देवीले आफ्नो त्रास यसरी प्रकट गरे । 'चालक अनुभवी छन्, नडराउनुस्, भोलाले सान्त्वना दिए । खलासीले थप्यो, '१५ वर्ष जति भयो होला उहाँले गाडी चलाएको ।' त्यसपछि सबैको सास आयो ।
भान्जी किमाथाङ्कालाई पत्र
सुमधुर स्मृति नयनबाट टाढा भयो